Nlekọta kwa ụbọchị nke jaket ala
1, Ihicha akọrọ The jaket ala nwere ike akọrọ-kpochara ma ọ bụrụ na egosiri. Enwere ike ihicha ya mgbe jaket ala ahụ nwere ntụpọ dị njọ, mana ọ ga-ezigara onye na-ehicha ihe ọcha ka ọ dị ọcha, iji zere mmebi nke jaket ala ahụ nke usoro nhicha na-erughị eru ma ọ bụ nke dị ala ...
Pịnye A Type A na-egosipụta profaịlụ uwe site na uwe na uwe na-enweghị úkwù, ma ọ bụ obere eriri n'úkwù, na oke obosara. Ọ nwere ike ịkọwa ahụ dị elu ma ọ bụ n'úkwù, ma kpuchie afọ gị, jiri anya mee ihe iji nweta nsị, zoo ntụpọ ahụ. Nchịkọta zuru ezu dị mfe ...
Uru elebara anya dị ka ndị ahịa chọrọ: 1. Nhọrọ ọnụahịa: ndị ahịa nwere ike ịhazi ụdị na ọnụahịa kwekọrọ na nke ndị otu ha, ka ha wee nwee ike ịghọta ohere ohere. 2. Fabric nhọrọ: omenala nwere ike kpam kpam na flexibly ahọrọ ákwà eji na c ...